Shiinaha diatomite kieselguhr bacriminta diatomaceous ciidda wax ka beddelka warshadaha granules dhulka iyo | Yuantong
JiLin Yuantong Macdanta Co., Ltd.
Kaaliyaha Sifeeyaha Diatomite
Badeecada Diatomite Calcined
Wax soo Saarka Diatomite Flux Calcined
Dhul diatomite dabiici ah
Ku darista sunta cayayaanka iyo budada
Waxyaabaha gaarka ah ee lagu buufiyo sunta cayayaanka
Budada cayayaanka lagu dilo
Kooxdayada & Macaamiishayada
diatomaceous diatomite silica diatomac granular ...
dabiiciga ah amorphous silica
Dhulka buuxa ee firfircoon
diatomite kieselguhr bacriminta diatomaceous S ...
diatomite kieselguhr bacriminta diatomaceous ciidda badalida granules dhulka
C05, C10, C15, C20, C30, C40
Ciid ciidda, Isugeynta ciidda
bacriminta dhulka diatomaceous dhagaxyada
cilad aan haboonayn oo carro-dabiici ah
20kg / Bac
50000 Metric Ton / Ton metric ton bishiiba
Baakado & Gaarsiin
Baakadaha: 1.Kraft warqadda bacda netk gudaha 20kg. Badeecadda bacda leh ee daabacan ee loo yaqaan 'PP' ee caadiga ah ee loo dhoofiyo 20 kg. 3.Prport caadiga ah 1000 kg PP-xidhkii 500kg bac .4.Si macmiil looga baahan yahay. Raritaan: 1. Marka laga hadlayo qaddarka yar (in ka yar 50kgs), waxaan isticmaali doonnaa xawli (TNT, FedEx, EMS ama DHL iwm), oo ku habboon. 2. Xaddiga yar (min 50kgs ilaa 1000kgs), waxaan ku geyn doonnaa hawada ama badda. 3. Marka laga hadlayo xaddiga caadiga ah (in ka badan 1000kgs), badiyaa waxaan ku rarnaa badda.
Deked kasta oo Shiinaha ah
Tirada (Metric Ton) 1 - 50 > 50
Est. Waqti (maalmo) 10 In lagu gorgortamo
Faa'iidooyinka carrada dhulka diatomaceous improver:
1.Waxaa lawada ogyahay in maadada loo yaqaan 'Silicon' ay muhiim u tahay koritaanka caafimaadka qaba ee dhirta iyo xididdada. In kasta oo silica amorphous-ka ku jira halabuurka diatomaceous-ka uu yahay mid aan milmi karin ciidda. Si kastaba ha noqotee, waa wax qaali ah in qaddar yar ay tahay silikoon la milmi karo, oo si tartiib ah loo sii deyn karo loona nuugi karo xididdada geedka, taas oo si weyn u wanaajinaysa xasaanadda dhirta iyo kor u qaadista awoodda geedka ee iska caabinta cudurka.
2. Dhulka Diatomaceous waa macdan dabiici ah oo xayeysiis ah, sidaa darteed waxay leedahay shaqooyinka haynta biyaha, haynta bacriminta iyo sii deynta joogtada ah. Biyo keydi, bacriminta badbaadi, waqti ilaali oo lacag badbaadi.
3. Dhulka Diatomaceous waa macdan dalool leh oo leh ficil fiiqan iyo hawl wareejin dambe oo dhinaca biyaha iyo xalka nafaqada, sidaa darteed waa mid ku habboon substrate dhaqanka aan ciid lahayn.
4. Diatomite waa qayb yar oo aan caadi ahayn oo iftiin leh oo aan la isku haleyn karin, taas oo yareyn karta cufnaanta carrada, carrada dabacsan, yareynaysa isugeynta, iyo fududeynta gelitaanka hawada, wareegga iyo qulqulka xididdada dhirta.
5. Qaab dhismeedka goonida u ah dhulka diatomaceous wuxuu door ka ciyaari karaa carrada, wuxuu kobcinayaa koritaanka bakteeriyada waxtarka u leh deegaankan, dheelitirka qoyaanka, heerkulka iyo cunnada laga helo, isla mar ahaantaana waxay leeyihiin saameynta dilka cayayaanka iyo cudurada, intaad isticmaaleyso diatoms Ciiddu waxay kordhin kartaa ka-bixidda ciidda waxayna kordhin kartaa oksijiinka ku jira ciidda, si bakteeriyada aysan u noolaan karin. Tani waxay badbaadin kartaa waxyaabo badan oo kiimiko ah iyo sunta cayayaanka, taas oo aan kaliya ilaalinayn deegaanka, laakiin sidoo kale yareyneysa qiimaha lagu daaweeyo cowska iyo dhirta.
6. Maaddaama dhulka diatomaceous uu yahay macdanta noolaha, waa qaboojiye carro dabiici ah, ammaan ah oo bey’adeed u wanaagsan.
Guji sawirka kore!
S: Sidee loo dalbadaa?
J: TALLAABADA 1: Fadlan noo sheeg xuduudaha farsamo ee faahfaahsan ee aad u baahatay
TALLAABADA 2: Kadibna waxaan dooraneynaa nooca saxda ah ee qalabka diatomite filter.
TALLAABADA 3: Pls noo sheeg shuruudaha xirxirida, tirada iyo codsi kale.
TALLAABADA 4: Kadib waxaan ka jawaabeynaa su'aalahan waxaanan bixinaa dalab ugu fiican
S: Miyaad aqbashaa soosaarka OEM?
S: Miyaad siin kartaa tijaabada tijaabada?
J: Haa, tijaabada waa bilaash.
S: Goorma ayaa alaab la keenayaa?
J: Waqtiga la bixinayo
- Amarka keydka: 1-3 maalmood ka dib helitaanka lacag-bixinta oo dhan.
- Amarka OEM: 15-25 maalmood ka dib dhigaalka.
S: shahaadooyinkee ayaad heshaa?
J: ISO, kosher, xalaal, Liisanka wax soo saarka Cuntada, Shatiga Macdanta, iwm.
S: Ma leedahay miinada diatomite?
A: Haa, Waxaan haynaa in kabadan 100 milyan oo tan oo diatomite ah taas oo ka dhigan in kabadan 75% dhammaan Shiinaha la xaqiijiyay keyd. Oo annaguna waxaannu nahay kuwa ugu xun ee diatomite iyo soosaarayaasha wax soo saarka ee Aasiya.
Hore: diatomaceous granules earth fertilizer Bacda carrada hagaajinaysa
diatomite macdanta lagu daro xoolaha lagu daro
Dufanka cuntada dabiiciga ah ee diatomaceous
Dahaarka qashin-qubka dusha sare ee diatomite dhulka ...
beeraha diatomaceous eco-saaxiibtinimo e ...
Kiimikada beeraha F30 TL301 diatomite Pe ...
budada diatomaceous diatomite calcined
Beerta warshadaha dhulka Diatomaceous, Linjiang City, gobolka Jilin, Shiinaha